Semalt: गुगल एनालिटिक्सको साथ सामाजिक मीडिया ट्राफिक कसरी ट्र्याक गर्ने?
गुगल एनालिटिक्सले हामीलाई यो हेर्न अनुमति दिन्छ कि ट्राफिक कहाँबाट आउँदछ र कसरी दर्शकहरूलाई उच्च-गुणवत्ताको सामग्रीमा संलग्न गराउने। थप रूपमा, हामी चाँडै नै लक्ष्यहरू सेट गर्न सक्छौं जुन हाम्रो व्यापार आवश्यकताहरूसँग मेल खान्छ र यदि हामीले हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्दछ भने मापन गर्न सक्दछौं। गुगल एनालिटिक्सको साथ तपाईका पाठकहरूको बारेमा मूल्यवान अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न यो सजिलो छ। यसले तपाइँलाई सामाजिक मिडिया ट्राफिक पहिचान र मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ। फेसबुक, ट्विटर, गुगल +, इन्स्टाग्राम, र लिंक्डइन सब भन्दा प्रख्यात सामाजिक मिडिया साइटहरू हुन् जुन तपाईंको साइटमा विभिन्न आगन्तुकहरू पठाउँछन्, र तपाईं आफ्नो गुगल एनालिटिक्स खाता मार्फत त्यसलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ रसल बार्बर, Semalt का एक शीर्ष पेशेवर, तपाइँलाई सोशल मीडिया ट्राफिक विभाजनको लागि कसरी उन्नत खण्डहरू प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँदछ। तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा तपाइँको आगंतुक को व्यवहार देख्न सक्नुहुन्छ।
गुगल एनालिटिक्सको साथ सुरू:
तपाईंले यसमा डुब्नु अघि तपाईंले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईं गुगल एनालाइटिक्सको नयाँ संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि तपाईलाई आफ्नो खातामा लग ईन गर्न र माथिको बाँया पट्टिको नयाँ संस्करण विकल्पमा क्लिक गर्न आवश्यक पर्दछ।
चरण # १: यातायात स्रोतहरू चिन्नुहोस्:
पहिलो चरण भनेको कुन सामाजिक मिडिया साइटहरूले तपाईंको साइटमा सब भन्दा बढी ट्राफिक पठाउँदै छ भनेर पहिचान गर्नु हो। यसको लागि तपाई ट्राफिक स्रोत विकल्पमा जानुपर्नेछ र सबै ट्राफिक छनौट गर्नुपर्नेछ।
चरण # २: उन्नत खण्ड सिर्जना गर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले ट्राफिक स्रोतहरू राम्रोसँग पहिचान गर्नुभयो, अर्को चरण भनेको ती साइटहरूको लागि उन्नत क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नु हो ताकि तपाईं ट्राफिकलाई विभिन्न कोटीहरूमा विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं भिन्न क्षेत्रहरू सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ र फरक तुलना गर्न तिनीहरूलाई तुलना गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण # 3: ट्विटर यातायात क्षेत्रहरू:
तपाईंको ट्विटर खाताको लागि उन्नत क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न यो सम्भव छ कि यसले कसरी अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरूसँग तुलना गर्दछ। यसको लागि तपाईको एनालिटिक्स खातामा उन्नत सेगमेन्ट विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र नयाँ कस्टम सेगमेन्ट सिर्जना गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए, तपाईले यस खण्डलाई उचित नाम दिनुपर्दछ र यसमा ट्वीटर डटकम, ट्वीटरडेक, हूटसुइट, बिट.लि, र टी.के. समावेश गर्नुपर्नेछ।
चरण #:: फेसबुक यातायात क्षेत्रहरू:
तपाईं फेसबुक ट्राफिक सेगमेन्टहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंको ट्विटर खाताको लागि ठीक उस्तै बनाइएको छ - तपाईंले फिल्टर नाम परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ फेसबुकबुक र एम.फेसबुक.कटमा।
चरण #:: Google+ यातायात क्षेत्रहरू:
तपाईं सजिलै Google+ ट्राफिक सेगमेन्टहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो तपाईंले फेसबुक र ट्विटर सेगमेंटहरू सिर्जना गर्नुभयो। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको प्लस .url.google.com को रूपमा तपाईंको फिल्टरको नाम हो। यो सुरक्षित छ भनि Google+ ले प्लस.url.google.com लिंकबाट धेरै यातायात पठाउँदछ। तपाईं गुगल.com यूआरएलबाट केही दर्शकहरू पनि देख्नुहुनेछ, तर यसलाई फिल्टरको सेक्सनमा समावेश गर्न आवश्यक छैन।
सामाजिक मीडिया ट्राफिक:
अब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी विभिन्न खण्डहरू सिर्जना गर्ने, यो अन्य सबै सामाजिक मिडिया साइटहरूको लागि पनि क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न सजिलो छ। तपाई बहुविध सेगमेंटहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र StumbleUpon, स्वादिष्ट, Digg, LinkedIn, र इन्स्टाग्रामबाट आएका आगन्तुकहरू सामेल छन्।
उदाहरण को लागी, तल वेबसाइटहरु छन् जुन तपाइँले सेयरमेन्टमा OR कथनको साथ समावेश गर्न चाहानुहुन्छ:
२. ट्विटर डॉट
यी केवल केहि उदाहरणहरू छन्, तर तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरूको आधारमा बिभिन्न सोशल नेटवर्कि sites साइटहरूको लागि धेरै सेगमेंटहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।